QSR Systems မှ Reality TV Productions များပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပါသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » QSR စနစ်များပိုမိုထိရောက်သော Reality TV ကို Productions လုပ်ငန်းကူညီမည်
ဖြစ်သော CBS အဖြစ်မှန်စီးရီး "ဒီလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး" အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှကင်မရာကိုမီဒီယာများ၏မြန်နှုန်းပေးပို့အသစ်မြန်နှုန်းမြင့် transcoder န်ထမ်း။
အဖြစ်မှန်ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်အရှိဆုံးစိန်ခေါ်မှုပြဿနာများ Valencia, Calif. -One ကင်မရာမီဒီယာ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ပါဝငျသညျ။ Productions မကြာခဏအယ်ဒီတာအဖွဲ့အဖွဲ့များမြင်ကွင်းများ, ပုံပြင်များနှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲထဲသို့ဆင်း whittling သူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုစတင်နိုင်မီ transcoded ခံရဖို့လိုအပျကွောငျးရိုက်ကူးနာရီများစွာအတွက်ရရှိလာတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကင်မရာများ၏ကြီးမားသောနံပါတ်များကို employ ။ ထိုသို့တစ်ခုတည်းရိုက်ကူး နေ့မှစ. ဘဏ်ဍာကိုရှောင်ကြဉ်ချင်ပါတယ်တဲ့အကုန်အကျနှောင့်နှေးရိုက်ကူး transcode မှနှစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုယူရန်အဘို့အဒါဟာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
post-ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း QSR စနစ်များသည်ဤအကြပ်အတည်းမှတစ်မူထူးခြားသောဖြေရှင်းချက်အတူတက်ရောက်လေပြီ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသိသိသာသာ transcoding ကင်မရာမီဒီယာများ၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအရှိန်မြှင်တဲ့စီးပွားဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုတီထွင်ခဲ့သည်။ မူလကကွန်ပျူတာကာတွန်း rendering များအတွက်တီထွင်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲအပေါ်အခြေခံပြီး, QSR ရဲ့ system ကိုတစ်ဦးအပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့စစ်ဆင်ရေးမှတဆင့် transcoding လုပ်ဆောင်တယ်။ Transcoding အညီလျှော့ချထုတ်လုပ်မှုနှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အကြားကွာဟမှုနှင့်အတူအခြားအမှုနည်းလမ်းများ၏အချိန်တစ်အစိတ်အပိုင်းပြည့်စုံသည်။
"ကျနော်တို့နာရီအနည်းငယ်၏အမှု၌တစ်ခုလုံးကိုရိုက်ကူး နေ့မှစ. မီဒီယာ transcode နိုင်ပါတယ်" ဟု QSR စနစ်များသမ္မတရော့ Cloyd ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာရှိရာသို့အလျင်အမြန်တစ်ရက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတည်းဖြတ်၏ဖန်တီးမှုအလုပ်စလုပ်ဖို့ပြပွဲဖွတဲ့ကြီးမားတဲ့အချိန်ငွေစုပါပဲ။ "
QSR လက်ရှိတွင်အသစ်သို့ဖြစ်သော CBS အဖြစ်မှန်စီးရီးရန်၎င်း၏မြန်နှုန်းမြင့် transcoding စနစ်ကထောက်ပံ့နေသည် အဆိုပါလက်ဆွဲအိတ်တစ်လုံး ပြည့်စုံအယ်ဒီတာအဖွဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်။ ဒါဝိဒ်သည် Broome အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့် 25-7 Productions အားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်ပြပွဲကနေအထိထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုတစ်ဒါဇင်ကျော်ကင်မရာများနှင့်အတူတိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းက်ဘ်ဆိုက်များမှာတည်နေရာပေါ်သေနတ်ဖြစ်ပါတယ် Sony က GoPros မှ F55s ။
1 အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအစို့နေ့ကရလာဒ်များ - ကင်မရာကိုမီဒီယာများ၏ 1.5TB ။ လယ်ပြင်၌အမှုထမ်း, ရှိသမျှဒေတာစုဆောင်းပြန်-ups ဖန်တီးအတွက်ပြပွဲရဲ့အယ်ဒီတာအဖွဲ့မှမိတ္တူပေးပို့ Los Angeles မြို့။ အဲဒီမှာဖိုင်များကို logged နေကြတယ်ပေမယ့်အစားမျိုချမိပါခံနေရနှင့်တစ်ဦးချင်း transcoded, တစ်ခုလုံးတနေ့ရိုက်ကူး, 400 ဖိုင်တွေသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်မြန်နှုန်းမြင့် transcoder မှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။
"ဒီ transcoder အရာစုံတွဲတစ်တွဲမ," ဖရန့် Salinas, ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post စစ်ဆင်ရေး၏ပြပွဲရဲ့ VP ကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာအယ်ဒီတာအဖွဲ့များအတွက် proxy များဖန်တီးပေးနှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြီးအဘို့အမြင့်မား resolution ကိုမှာမီဒီယာတစ်စက္ကန့်အချိန် transcodes, ဖိုင်တွေကိုကင်မရာအရင်းအမြစ်များအတွက်သင့်လျော်သော codec ၌နေသောကို detect ။ "
သိသာထင်ရှားသောအချိန်ငွေစုအတွက်အပြိုင်ရလဒ်များကိုအတွက် file တွေကို processing ၏မြန်နှုန်းမြင့် transcoder ရဲ့နည်းလမ်း။ "ကျနော်တို့ကမြန်ဆန်နည်းပါးလာအရင်းအမြစ်များနှင့်လူကိုနာရီနဲ့အများကြီးန်းကျင်အမှုအရာကိုဖွင့်နိုင်ကြသည်," Salinas ကဤသို့။ "ပုံမှန်အားဖြင့် 30 သို့မဟုတ် 40 နာရီကိုယူမယ်လို့တစ်ဦးကဖြစ်စဉ်ကိုထက်လျော့နည်းတစ်ဆယ်ပြုလျက်ရှိသည်။ "
လက်ထောက်အယ်ဒီတာအုပ်စု, တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်အများကြီးရှိရာသို့အလျင်အမြန်ရိုက်ကူးထပ်တူပြုခြင်း၏လုပျငနျးစတငျနိုငျခဲ့ကွသညျ။ "ကျနော်တို့ရိုက်ကူးပြီးသွားပြီလေးဆယ်ရှစ်နာရီကြာပြီးနောက်အရာအားလုံးဇာတ်လမ်းဌာနအဘို့အဆင်သင့်ပါပဲ" ဟု Salinas ကပြောပါတယ်။
အဆိုပါမြန်နှုန်းမြင့် transcoder ကိုလည်း metadata ကိုစီမံခန့်ခွဲသည်လမ်းမှတဆင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပြီးအတွက်အချိန်ကယ်တင်တော်မူ၏။ "ဒီစနစ်ကသတင်းအချက်အလက်ချို့တဲ့သည်အဘယ်မှာရှိ GoPros နှင့်အလားတူကင်မရာကနေဖိုင်တွေများအတွက် metadata ကိုသို့ timecode ည့," Cloyd ရှင်းပြသည်။ "ဒါဟာကိုက်ညီနေစဉ်အတွင်းနှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်အာမခံချက်, ဒါလူ့အမှားကျော်မျှမကပိုစိုးရိမ်ရှိရဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြေရှင်းချက်နှင့်တကွ, metadata ကိုအမြဲတူညီသည်။ "
အဆိုပါရလဒ်ထုတ်လုပ်မှုကနေဖြန့်ဝေဖို့ပိုပြီးထိရောက်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်-အခမဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ "Post ကိုထုတ်လုပ်မှုဒါချောမွေ့ခဲ့ဘယ်တော့မှနေပါတယ်" ဟု Salinas ကပြောပါတယ်။ "ကျနော်တို့ကအကျင့်ပျက်ခြစားမှုသို့မဟုတ်ပုံတူဖိုင်တွေနဲ့အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှကြုံတွေ့ကြပြီမဟုတ်။ ဒါဟာ finish ကိုမှရော့ခ်အစိုင်အခဲက start ခဲ့ပါတယ်။ "
2002 စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, QSR စနစ်များ Post-ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများငှားရမ်းခြင်း, အရောင်း, & ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းမှဝန်ဆောင်မှု၏တစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ State-Of-The-Art နည်းပညာ, လုပ်ငန်းအသွားအလာဒီဇိုင်း, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်မတူနိုင်တဲ့ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် qsrsystems.com
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ရပ်တခု တည်းဖြတ်ခြင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှု QSR တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် လုပ်ငန်းအသွားအလာ 2015-06-29
ယခင်: TV2 Fyn Kahuna ခလုတ်, Maverik ထိန်းချုပ်မှုနှင့် Sirius 800 router ကိုအတူ HD ကိုဝင်
နောက်တစ်ခု: Lindenwood တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား-Run ကိုစတူဒီယိုနှင့်ဖျော်ဖြေမှုထုတ်လုပ်မှုများအတွက် Hitachi HDTV ကင်မရာများကိုအပေါ်မှီခို